David Ley သည်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဆန်သော porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော xHamster နှင့်ပူးပေါင်းသည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
David Ley သည်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္areာရီဆန်သော porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော xHamster နှင့်ပူးပေါင်းသည်။
ဒါဝိဒ်သည် Ley ၏ရေးသားသူဖြစ်ပါသည် လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား, Dick များအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ Porn နှင့် လှည့်စားတတ်သောမိန်းမများ - လမ်းလွဲစေသောအမျိုးသမီးများနှင့်သူတို့ကိုချစ်သောသူများ cuckoldry ၏ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းကို။ သူ 30 စာဖြင့်ရေးသားထားပြီးသို့မဟုတ်ဒီတော့ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် NoFap ထှကျသှားစပွေီး, porn စွဲ, လိင်စွဲ, porn- သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု။ David Ley ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးတစ်စုံတစ် ဦး ကပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်လာပါက ၄ င်းတို့တွင်“ အခြားပြissuesနာများ” ရှိနေသည်ဟုဆိုထားသည်။ တီဗီရှိုးများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်အများအားဖြင့်လီအားညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများအပေါ်“ အခွင့်အာဏာ” အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်များက - သူပြည်နယ်တစ်ခုတိကျမှန်ကန်ရုပ်ပုံပေးလိမ့်မယ် အင်တာနက်စွဲလမ်းသုတေသန - ယေဘုယျအားဖြင့်အထူးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ်အာရုံစိုက်နေကြသည်မဟုတ်။ မဟုတ်သလိုသူတို့စိတ်အားထက်သန်ဒေါက်တာ Ley သကဲ့သို့အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။ သူထို့ကြောင့်စွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်၏ neuroscience အတွက်ပညာရေးသူ၏ပြင်မရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းမီဒီယာအတွက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံပုံဖော်ဖို့ရရှိသွားတဲ့နှင့်မဆိုမူလသုတေသနထုတ်ဝေဘယ်တော့မှဘဲလျက်။
ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်သူ၏အနီးကပ်မဟာမိတ် နီကိုးလ် Prause မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် (Voon, Kraus, Potenza, အမှတ်တံဆိပ်, Laier, Hajela, Kuhn, Gallinat, Klucken, Seok အပေါ်အလွန်အမင်းလေးစားလေ့လာမှုများပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကြသူအမှန်တကယ်ထိပ်ပိုင်းစွဲအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အနေဖြင့် "ပညာရှင်တွေရဲ့" ညီတူညီမျှအဖြစ်ကိုးကားနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူတွဲဖက်အလုပ်လုပ် , Sohn, etc Gola, Kor,), ချန်လှပ်ထားပါသည်။ မဟုတ် Ley မဟုတ်သလို Prause မဆိုတက္ကသိုလ်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြဖြစ်ကောင်းလွှမ်းမိုးမှု, သေးသောအချို့ဂျာနယ်လစ်များ, Prause ရဲ့အစွမ်းထက်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများ, ထူးထူးဆန်းဆန်းယေးလ်တက္ကသိုလ်, ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်, Duisburg-အက်ဆင်း၏တက္ကသိုလ်, နှင့်မက်စ် Planck အင်စတီကျုမှာထိပ်တန်းအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကျော်နှစ်ဦးစလုံးကြိုက်တတ်တဲ့။ ကိန်းဂဏန်းသွားပါ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ Ley နှင့်သူ၏အရင်းနှီးဆုံးမဟာမိတ်နီကိုးလ်ပရာ့စ်သည်သိသာထင်ရှားသည့်နောက်ကွယ်မှပူးပေါင်းကြံစည်မှုများ၊ ဂျာနယ်လစ်များအားကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်း၊ စကားပြောအချက်အလက်များဝေမျှခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များထံအီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်နည်းလမ်းများဖြင့်လွှမ်းမိုးခြင်းများပင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4, စာမျက်နှာ 5။ ) ။ နှစ် ဦး စလုံးသည်ညစ်ညမ်းခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များကိုသတိပေးသည့်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်ကိုသတင်းပို့သည့်သုတေသနကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားအသရေဖျက်ကြသည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူရန်လူသိရှင်ကြားပြောဆိုကြသောလူငယ်များသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းများပါ ၀ င်သည်။ ဒီလင့်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်: ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes # 12 အတူတူ, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, Gabe # 4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15။ Prause & Ley နှစ်ခုစလုံးသည်စွဲလမ်းကြသည် porn-သွေးဆောင် ED debunking ဘာမျှမ၎င်းတို့၏ဖို့ပိုပြီးထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ် လိုလားတဲ့ porn အစီအစဉ် (Prause / Ley ကိုလည်းရ၏ ဤပညာရေးစာတမ်းနှင့်ဂျာနယ်၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် MDPI ကိုသုံးနှစ်စစ်တိုက်ခြင်း).
မကြာသေးမီက Prause နှင့် Ley တစ်ဦးညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ထောက်ခံမှုမှာသူတို့ရဲ့သိက္ခာမဲ့နှင့်မကြာခဏတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဇန်နဝါရီလ 29, 2019 တွင်, Prause တစ်ဦးတင်သွင်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ YOURBRAINONPORN နှင့် YOURBRAINONPORN.COM ရရှိရန်။ ဧပြီလ 2019 ခုနှစ်, အုပ်စုတစု Prause နှင့် Ley ကဦးဆောင်ရာတွင်ပါဝင်နေ ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု of YourBrainOnPorn.com "RealYourBrainOnPorn.com ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်။
သူတို့ရဲ့တရားမဝင် site ကို advertise ဖို့, Self-ဟစျကျွောကွ "ကျွမ်းကျင်သူများက" (တစ်တွစ်တာအကောင့် createdhttps://twitter.com/BrainOnPorn), ယူကျု့ချန်နယ်, Facebook ကစာမျက်နှာနှင့်ထုတ်ဝေနေတဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ အများပြည်သူရှုပ်ထွေးနေတဲ့နောက်ထပ်ကြိုးပမ်းမှုမှာသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မဟုတ်မမှန်ဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့အိမျမြို့ကနေအစပြုတာမှမလုပ်ပဲ - Ashland, အော်ရီဂွန် (ထို "ကျွမ်းကျင်သူများက" ၏အဘယ်သူမျှမပါစေတစ်ဦးတည်း Ashland, အော်ရီဂွန်မှာနေထိုင်) ။ သည် "ကျွမ်းကျင်သူများက" perusing အားဖြင့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စစ်မှန်ရှာဖွေရေးသိပ္ပံနည်းကျအမှန်တရားများ၏အကျိုးစီးပွားပိုမိုတိုးချဲ့ရန်ရှိမရှိကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အတရားသူကြီး RealYBOP tweets ၏ဤစုဆောင်းခြင်း။ ဒေါက်တာ Prause ရဲ့၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ ထူးခြားတဲ့အထင်မြင်မှားစေသောစတိုင်, ချက်တွေကို porn ၏အကျိုးကျေးဇူးများခြီးမွှောအဆိုပါသုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်ရှေ့နောက်မနှင့် တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ trolls Prause ယခင်ကနှောင့်ယှက်ထားပါတယ်.
ထို့အပြင် "ကျွမ်းကျင်သူများက" (တစ် Reddit အကောင့် createdအသုံးပြုသူ / sciencearousal) spam များကိုညစ်ညမ်းပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များမှ reddit / pornfree နှင့် reddit / NoFap နှင့် ပရိုမိုးရှင်း drivelညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်မရှိသော၊ YourBrainOnPorn.com နှင့် Gary Wilson ကိုရှုတ်ချသည်။ သတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဟောင်းတစ်ဦးပညာသင်နှစ်, တစ်ခုရှိ ရှည်လျားသောမှတ်တမ်းတင်သမိုင်း porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များအပေါ် post မှမြောက်မြားစွာနာမည်အလုပ်သမားများ၏။ (YBOP ယခု Prause နှင့်သူမ၏လိုလားသူ porn မဟာမိတ်များနှင့်အတူဥပဒေရေးရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်စေ့စပ်).
အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများ (ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံ) David Ley အတွက်အသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့နေများကသူ့အားလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုများကို“ ဖြိုဖျက်” ရန်ငွေကောင်းပေးသည်။ သူသည်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကို“ ပြိုကွဲစေသည့်” စာအုပ်များရောင်းချသည်။ သူသည်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကို“ ပြိုကွဲစေခြင်း” အတွက်စကားပြောခပေးသည်။ အားလုံးဒီနေ နှောင့်ယှက် နှင့် defaming အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဖွင့်မပြောတတ်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ။
သို့သျောလညျး Ley တရားဝင်ယခုမျဉ်းကိုကူးခဲ့သည်။ သူက porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး xHamster နှင့်အတူပူးပေါင်း၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုမြှင့်တင်ရန်သူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဝယ်ယူထားသောဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်! ဘယ်လိုသတိထားမိ Ley xHamster ဖောက်သည်ကိုပြောပြမယ့် အဘယ်အရာကို "ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအမှန်တကယ် porn, camming နှင့်လိင်အကြောင်းကိုပြောပါ":
Ley xHamster ဖောက်သည်ကြောင်းပြောပြလိမ့်မယ် (70 ခန့်) အစဉ်အဆက်ယောက်ျားအပေါ်ထုတ်ဝေတိုင်းလေ့လာမှု ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စပ်လျဉ်းစိတ်ကျေနပ်မှုပိုမိုညစ်ညမ်းလင့်များ? Ley သမျှသောသူတို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ် 52 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ porn သုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲမူးယစ်ဆေးစွဲတွင်တွေ့မြင်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံတင်ပြ? သူက porn အသုံးပြုသူ% 50 သူ၏ပရိသတ်ကိုအသိပေးပါလိမ့်မယ် သူတို့ယခင်ကစိတ်မဝင်စားသို့မဟုတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တွေ့ရှိခဲ့ပစ္စည်းမှမြင့်တက်အစီရင်ခံစာ? တစ်နည်းနည်းနဲ့ငါကသံသယ။
အထူးသညျဒါဝိဒျ Ley နှင့်အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ရှိ တစ်ဦး xHamster က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူပူးပေါင်း (StripChat) ။ ကြည့်ပါ "Stripchat သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန် porn-ဗဟိုပြုဦးနှောက်လေဖြတ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ aligns။ " Stripchat သည် SHA ၏တင်ဆက်မှုများကို ၀ ယ်ယူပြီး Ley နှင့်အခြားသူများအား၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းသော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သွယ်ဝိုက်လျော်ကြေးပေးသည်။
ဒီ post ကိုပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာ Ley ကသူမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည် တိုက်ရိုက် "ညစ်ညမ်းသောကုမ္ပဏီ" မှလျော်ကြေးပေးသော်လည်းဤသည်မှာဆံပင်များဖြစ်သည်။ Stripchat သည် SHA ကိုလျော်ကြေးပေးသည် SHA ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် Ley. ၎င်းသည်ဆေးလိပ်သောက်သည့်စိတ်ပညာရှင်ဆရာဝန်နှင့်ဆင်တူသည်မှာသူသည် Phillip Morris မှတိုက်ရိုက်မပေးသော်လည်းအစားထိုးလျော်ကြေးပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည် ဆေးရွက်ကြီးဌာန။ ကောင်းသောအစမ်း, David ။ (Ley ကလည်း Stripchat သည်မဟုတျဟုအခိုင်အမာပြောဆိုသည် သာ SHA တင်ပြချက်များကို ၀ ယ်ယူသူနှင့် Stripchat မှ SHA ၀ င်ငွေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာရရှိသည်။ ဘာဖြစ်သလဲ?)
စာနယ်ဇင်းသမားများအပါအ ၀ င်မည်သူမျှ Ley ၏တစ်ဒီဂရီခွဲခြားခြင်းလှည့်ဖျားကို ၀ ယ်သည်မဟုတ် (Sexcam ကုထုံး - စိုးရိမ်စိတ်ရှိသူများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးပေးသည့် cam site ၏အတွင်းပိုင်း):
"ဒါဟာမမြဲသောပြတင်းပေါက်တစ်ခုမှလွဲ။ မဆုတ်မနစ်အသားပြပွဲ။ ထိုတွင်အမျိုးသားတစ် ဦး သည်နေသာသောနောက်ခံရှေ့တွင်အပြာရောင်လည်ပင်းပွင့်သောရှပ်အင်္ကျီတွင်အမှတ်တမဲ့နေရာယူထားသည်။ သူ့ကိုနှိပ်ပြီးသင်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာကုသသူဒေါက်တာဒေးဗစ်လိုင်နှင့်စကားပြောသည် Stripchat ကငှားရမ်းထားသည် site အသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့အုပ်စုတစ်စုကုထုံးအစည်းအဝေးများကမ်းလှမ်းရန်။ "
သူတို့ရဲ့မြှင့်တင်ရေးတွစ်တာတွင် SHA ဦး နှောက်မှကျွမ်းကျင်သူများသည်အသုံးပြုသူများကို“ ညစ်ညမ်းသောစိတ်ပူပန်မှု” နှင့်“ ရှက်ခြင်း” ကိုသက်သာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်ဟုကတိပေးထားသည် (Ley နှင့်အခြား SHA“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည် ဦး နှောက်ကိုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ )
ထောငျခါစလိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်အခြားနှစ်ဦးကိုလည်းပါဝင်သည် RealYourBrainOnPorn.com "ကျွမ်းကျင်သူများက" (Justin Lehmiller နဲ့ Chris Donaghue) ။ RealYBOP ၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပါသည် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးလိုလားသူ pornကဦးဆောင်, Self-ဟစျကျွောကွ "ကျွမ်းကျင်သူများက" နီကိုးလ် Prause။ ဤအုပ်စုလက်ရှိတွင်ပါဝင်နေသည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင် တရားဝင် YBOP ဆီသို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းစွာထားပါ YBOP ကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားနေသူများသည်လည်းညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပူးပေါင်းရန်ငွေပေးရသည် ၄ င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် porn နှင့် cam site များတွင်ပြproblemsနာမရှိကြောင်းသုံးစွဲသူများအားအာမခံရန်။ (မှတ်ချက် - နီကိုးလ်ပရပ်စ်သည်ညစ်ညမ်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်နီးစပ်ပြီးလူသိရှင်ကြားဆက်စပ်မှုရှိသည် ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်.)
အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူတဦးက StripChat တွစ်တာအကောင့်မှထုတ်ဖော်ပြသ ဖောက်သည်များပေးဆောင်ခြင်း၏ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကသူတို့စိုးရိမ်ဝေဒနာတွေမှ: SHA "ကျွမ်းကျင်သူများက" ပေးဆောင်ခြင်းအဘို့အစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းပြချက်။ အဆိုပါ SHA ချယ်ရီ "သူတို့" သုတေသီများအားဖြင့်ပြုသောအမှုအလုပ်ကောက်နေ, ကြောင်းကို "လိင်, camming နှင့်စွဲလမ်းပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနအကြောင်းပြောနေတာ" ကဒီလိုဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ Ley / SHA လိမ့်မည် လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာများပြားလှအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုမှ porn အသုံးပြုမှုကိုလင့်ထားသောဖော်ပြထားခြင်း?
In ဤဆောင်းပါးတွင်, Ley, သူ့သွယ်ဝိုက်လျော်ကြေးငွေ porn စက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးပယ်ချ:
ဘက်လိုက်? Ley ၏ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဆေးရွက်ကြီးဆရာဝန်များ, နှင့်လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့၏ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး ဆေးရွက်ကြီး Institute မှ။
ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်း၏စကားပြောစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်လျော်ကြေးငွေပေးအပ်နေစဉ် Ley တွင်အကျိုးစီးပွားပconflictsိပက္ခအနည်းငယ်ရှိသည်။
အကျိုးစီးပွား #2 ၏ပဋိပက္ခ: ဒါဝိဒ်သည် Ley ဖြစ်ပါသည် paid ခံရ porn နှင့်လိင်စွဲ debunk ရန်။ အဆံုးမှာ ဤ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ် Ley သည်သူ၏န်ဆောင်မှုကို advertise:
အကျိုးစီးပွား #3 ၏ပဋိပက္ခ: Ley "ပိုက်ဆံလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ (ငြင်းပယ်နှစ်ခုစာအုပ်တွေရောင်းစေသည်လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား"2012 နှင့်"Dick များအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ Porn,"2016) ။ (porn ကုမ္ပဏီကြီး MindGeek ကပိုင်ဆိုင်သော) Pornhub porn အကြောင်းကို Ley ရဲ့ 2016 စာအုပ်များအတွက်စာရင်းငါးခုကိုပြန်-ဖုံးထောက်ခံချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
မှတ်ချက်: PornHub ခဲ့သည် RealYBOP ရဲ့ကနဦး tweet Retweet မှဒုတိယတွစ်တာအကောင့် PornHub နှင့်တို့အကြားညှိနှိုင်းအားထုတ်မှုအကြံပြုခြင်း၎င်း၏ "ကျွမ်းကျင်သူ" (လိုလားတဲ့ porn) က်ဘ်ဆိုက်ကြေညာ RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများက။ ဝိုး!
အကျိုးစီးပွား #4 ၏ပဋိပက္ခ: နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဒါဝိဒ်သည် Ley မှတဆင့်ပိုက်ဆံစေသည် ကျဲအိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအဘယ်မှာရှိသူသည်မိမိနှစ်ခုစာအုပ်များ (ရာမဆငျမခွ (ထဲမှာထွက်သတ်မှတ်စွဲလမ်း-deniers '' သဘောတရားအားပေးအားမြှောက်?) လေ့လာမှုများများစွာနှင့်အသစ်များ၏အရေးပါမှုကိုလျစ်လျူရှု compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ရောဂါ ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဖြေရှာတဲ့ကို manual ထဲမှာ။ Ley porn အသုံးပြုမှုအပေါ်သူ၏တဖက်သတ်အမြင်များ featuring ကသူ၏များစွာသောဆွေးနွေးပွဲများများအတွက်လျော်ကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ 2019 တင်ဆက်မှုများတွင် Ley ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ပေါ်လာသော: အပြုသဘောဆောင်သောလိင်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ.
ဒါကရေခဲတောင်၏ရုံအစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဝိဒ်သည် Ley ပါဝင်သောများစွာသောပိုပြီးဖြစ်ရပ်များအတွက်ဤစာမကျြနှာ Peruse:
နီကိုးလ် Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားအန္တရာယ်ရှိစွာအသုံးပြုခြင်း.
Update # 1: StripChat မှနောက်ထပ်ဒေးဗစ်လေဒီတွေ့ဆုံမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ Stripchat မှ“ #NoNutNovember” လိပ်စာအားအွန်လိုင်းကုထုံးသင်တန်းကိုကြေငြာသည်။
မှတ်ချက် - အထက်ကဖော်ပြခဲ့တာက Nofap.com နဲ့သူတည်ထောင်တဲ့ Alex Rhodes ကိုတကယ်ပစ်မှတ်ထားတယ်။ ကြည့်ပါ - Nicole Prause၊ David Ley & RealYBOP ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း NoFap မှ Alexander Rhodes
update ကို #2(နိုဝင်ဘာလ, 2019)နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ အမှတ်စဉ်မှားယွင်းတဲ့စွပ်စွဲသူ၊ အသရေဖျက်မှု၊ နှောင့်ယှက်သူ၊ “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏မတူကွဲပြားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤ6မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Porn သည်စွဲစွဲလမ်းမှုလော။.
နောက်ဆုံးအဆင့် # 3: ယခု Ley တွင်ကိုယ်ပိုင် StripChat စာမျက်နှာရှိသည် - https://stripchat.com/blog/tag/sexuality/
သငျသညျ Snapchat ၏ကြားဖူးတယ်။ သင်တို့မူကား Stripchat ၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ?
အခြေခံအားဖြင့် ဝဘ်ကင်မရာ၏ မှန်ဘီလူးကိုဖြတ်၍ ဖယ်ထုတ်ထားသော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည့် အဆိုပါဆိုက်သည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများကြားအတွင်း စစ်တမ်းတစ်ခုကို မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများ၏ လေးဆယ့်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းသည် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ၎င်းတို့သုံးစွဲသည့်အချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ “အချို့” စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း အစီရင်ခံကြသည်။ အသုံးပြုသူ ဆယ့်တစ်ရာခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့သည် "မကြာခဏ သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ်" စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ခံစားရသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့အပြင်လက်ထပ်အသုံးပြုသူ 29 ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့လက်ထပ်အသုံးပြုသူ 31 ရာခိုင်နှုန်းကို Stripchat သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းထင်ရှားနေချိန်တွင်မိမိတို့၏ streaming များ, cheat ဖွဲ့စည်းစိုးရိမ်နေကြသည်ကသတင်းပို့သည်။
Stripchat အလေးအနက်ထားသည်ဤဂဏန်းကြာ: "ပူပန်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ဖိစီးမှုလေးနက်ကိစ္စများဖြစ်ကြသည်" သူတို့အသိအမှတျပွု။ "Camming နေ့စဉ်ဘဝမကဖြည့်စွက်အရာတစ်ခုခုရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကနေအပျော်အပါးများနှင့်မှီခိုရာအရင်းအမြစ်တခုဖြစ်သင့်သည်။ Stripchat တစ်ဦးကတိကဝတ်ယင်း၏အသုံးပြုသူများအများအတွက်ကောင်းစွာ-ဖြစ်ခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ခံစားမှုအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ "
ထို့ကြောင့် Stripchat ယင်း၏မိတ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြေညာ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်သြဂုတ်လ 1 ၏အဖြစ် "လိင်စွဲလမ်းနှင့်အွန်လိုင်းဖောက်ပြန်အကြောင်းကိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cam ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်, လိင်သုတေသီများနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာကုသဆောင်ကြဉ်းရန်" အတူ။ ဒါဟာအစ "ဤသည်သင်၏အသက်တာ၌ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းနိုင်ပါတယ်နည်းလမ်းများ။ " ဆွေးနွေးကြမည်
"cheat camming ပါသလား"
"သင်တစ်ဦး cam မော်ဒယ်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျနိုင်သလား?"
သြဂုတ်လ ၁ ရက်  ဆွေးနွေးပွဲကို ဦး ဆောင်ခဲ့သူဒေါက်တာဒေးဗစ်လိုင်ကခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့သည် လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှားဒါကြောင့်အဆုံးစွန်သောမေးခွန်းရဲ့အဖြေဟာအသံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပုံရသည် "မ။ "
အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းပိုပြီးစေသည် အဆိုပါ NFL, NBA နှင့် MLB ပေါင်းစပ်ခြင်းထက်။ ဒါဟာအစအား NBC, CBS ကထက်ပိုမိုစေသည်နှင့် ABC ရုပ်သံပေါင်းစပ်။ ကောလာဟလများဖြစ်နေတယ် နှစ်စဉ် $6နှင့် $ 97 ဘီလီယံခန့်အကြားတစ်ဖွဲ့လုံးပိုက်ကွန်အဖြစ် porn စက်မှုလုပ်ငန်းသော။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမှစွဲလမ်းနှင့်ဆိုးဖြစ်မည်အကြောင်းယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုစည်းရုံး Stripchat အချို့သောကောင်းတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်မခေါ်စေခြင်းငှါ, အတိအကျဘာမဟုတျပါဘူး။
မက်စ် Bennett က, Stripchat မှာသတင်းမီဒီယာများ၏ဒုတိယသမ္မတ, ကနဦးသြဂုတ်လ 1 session တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်း commented "သူတို့ကိုဒဏ္ဍာရီနှင့်အမည်းစက်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းအချို့အတိတ်ရနှင့်သိပ္ပံအမှန်တကယ်အဘယ်သို့မိန့်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်အဘို့အခွင့်အလမ်း။ "
စတင်အဘို့, ညစ်ညမ်းသုံးပြီးဦးနှောက်ထဲမှာမီးခိုးရောင်ကိစ္စကျုံ့, ယင်းမက်စ် Planck အင်စတီကျုကတင်ပြထားပါတယ်။ ဒါဟာယောက်ျားစေသည် ဆငျးရဲခံရဖို့ပိုဖွယ်ရှိ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေ။ ဒါဟာအစမှလူသိများသည် စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေ စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုကိစ္စများအပါအဝင်ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်။
ဒါဟာတဦးတည်းသုံးအတွက် Stripchat အသုံးပြုသူများအ Stripchat သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသတင်းပို့ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ porn ကိုအသုံးပြုဖို့သူကပြည်သူ့ ဒီထက်သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ကိုချစ် နှင့်ပိုပြီးလိင်မကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။ ညစ်ညမ်းကိုလည်းပြသထားသည် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တိုးမြှင့် 300 ရာခိုင်နှုန်း။
ဒီတော့ Stripchat ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများကကြောင်း porn စွဲလမ်းမဟုတ်ပါဘူးနှင့် camming လိမ်မဟုတ်ပါတှေ့ရရင်တောင်ဒါခေါ်လိင်ကျွမ်းကျင်သူများကဖြေကြားရန်လိုအပ်ကြောင်းအခြားမေးခွန်းများအများကြီးရှိနေဆဲရှိပါတယ်။ မက်စ် Bennet ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူတွေကို "ပြင်ပကမ္ဘာကအမြဲလကျမခံပါဘူး" အဲဒီကဖော်ပြသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းဒီစိတ်ဓာတ်တွေများအတွက်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
Stripchat အမှန်တကယ်ယင်း၏အသုံးပြုသူများအများအတွက်ကောင်းစွာ-ဖြစ်ခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ခံစားမှုအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လိုပါကအဆိုအရ "သိပ္ပံ," ကလုံးဝ stripchatting ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့သူတို့ကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်။
နောက်ဆောင်းပါး -Sexcam ကုထုံး - စိုးရိမ်စိတ်ရှိသူများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးပေးသည့် cam site ၏အတွင်းပိုင်း"
16th စက်တင်ဘာလ 2019
ဒါဟာမဆုတ်မနစ်သောပြတင်းပေါက်တစ်ခုမှ လွဲ၍ မဆုတ်မနစ်ဇွဲပြသသည့်ပြပွဲဖြစ်သည်။ ထိုတွင်အမျိုးသားတစ် ဦး သည်နေသာသောနောက်ခံရှေ့တွင်အပြာရောင်လည်ပင်းပွင့်သောရှပ်အင်္ကျီတွင်အမှတ်တမဲ့နေရာယူထားသည်။ သူ့ကို နှိပ်၍ သင် Stripchat မှငှားရမ်းထားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာကုထုံးဒေါက်တာဒေးဗစ်လဲ့နှင့် site တစ်ခုကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့အုပ်စုလိုက်ကုထုံးသင်တန်းများပြုလုပ်ရန်စကားပြောပါ။
ညစ်ညမ်းသောကမ္ဘာတွင်များသောအားဖြင့်မမြင်ရသောလူမှုရေးသိစိတ်သည်အတိုင်းအတာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအားဖြေရှင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Ley လာတဲ့နေရာကကုထုံးပညာရှင်နဲ့စာရေးဆရာပါ လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား.
Ley က Stripchat သည် Sexual Health Alliance နှင့်အတူသူ့အားချဉ်းကပ်ခဲ့သည်၊"ပုံမှန် sexcam အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်အရှက်ကွဲခြင်း၊ ကျန်းမာသောနည်းလမ်းများ။ မေးခွန်းမှာအွန်လိုင်းအကြံပေးမှု၏တိုတောင်းသောအစီအစဉ်သည်မိမိတို့အား porn နှင့် cam မိန်းကလေးများအားစွဲလမ်းသည်ဟုထင်မြင်သူအားအမှန်တကယ်ကူညီနိုင်ပါသလား။
"ဒါဟာ [sexcam] ဟာချိန်းတွေ့တာထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ငြင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ ဂိမ်းလည်းမရှိဘူး၊ မင်းက sexy မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့မင်းလိင်ဆက်ဆံမယ်။ ”